Budada cagaaran iyo xashiishka (53-41-8) hplc = 98% | AAraw powder steroid
/ Products / Anterolics steroids / Budada Androsterone
5.00 ka mid ah 5 ku saleysan 1 macaamiisha rating
SKU: 53-41-8. Category: Anterolics steroids
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saarka iyo awooda wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga budada Androsterone (53-41-8), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada Androsterone waa steroid styroic kaas oo ka dhaco guud ahaan guud ahaan dabiiciga, gaar ahaan xayawaanka, laakiin sidoo kale dhir badan, oo ay ku jiraan geedo geed iyo boqoshaada truffle. Waa horudhac ah tijaabinta testosterone, laakiin laftiisa, way ka yara adag tahay testosterone ee dhiigga. Natiijada, Androsterone wuxuu faa'iido badan u leeyahay jir-dhiseyaasha marka la qaadayo xargo oo la socota steroids oo kale iyo anogenikada.
Fiidiyowga budada Androsterone
Biyaha budada ah ee Androsterone Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Budada Androsterone
Formula kelli: C19H30O2
Miisaankani waa: 290.44
Dhibcaha Biyaha: 181-184 ° C
Color: budo White
Isticmaalka budada dufanka Androsterone ee wareegga steroids
5α-androstan-3a-ol-17-mid. Dufanka Androsterone (CAS 53-41-8)
Isticmaalka budada dufanka ee 'Androsterone'
Budada Androsterone waxaa laga qaadi karaa laf-dhabarka iyada oo loo marayo dhejis ama hadal afka ah. Marka ay isbeddelayaan, budada Androsterone waa in lagu qaato hadal ahaan 400mg ilaa 600mg maalin kasta ama ku-beddelasho 200mg ilaa 300mg maalin kasta. Marka la gooyo budada Androsterone, qiyaasaha waa in la yareeyo 200mg ilaa 400mg, iyadoo ku xiran qadarka steroids ee xargaha. Wareega koowaad, waxaa lagula talinayaa in la qaato qiyaasta ugu hooseysa ee suurtogalka ah in loo isticmaalo hormoonnada sii kordhaya ee hormoonnada jirka. Maalinta labaad ama seddexaad, qiyaasta daawada ayaa loo kordhin karaa cayaaraha iyadoo loo dulqaadanayo steroid.
Digniin ku saabsan budada cagaaran ee loo yaqaan 'macruufka' Androsterone (CAS 53-41-8)
Iyadoo ay sabab u tahay awoodda quudinta ee asaasiga ah, kuwa u nugul xayawaanka qaabka labka ah waa inay ka fogaadaan xaruntan iyada oo lumay khafiif khafiif ah khatarta u ah kuwa u nugul.
Macdanta cagaaran ee Androsterone waa feejignaan aad u fara badan oo faa'iidooyin badan u leh isticmaalka. Macdanta cagaaran ee Androsterone waxaa lagu daray qaybta asalka ee LG Science T-911 ee kor u kaca pre-seedout ee ay bixiso, waxaana sidoo kale lagu daray qadar yar oo hore ee LG-Science Formadrol Extreme ee hantida anti estrogen. Waqtigan xaadirka ah, budada dufanka ah ee EpiAndterterone iyo budada Androsterone ayaa lagu heli karaa tijaabada Epi-1.
Sida loo iibsado budada Androsterone (CAS 53-41-8) laga bilaabo AASraw
Faallo ama Fariin
AASraw waxay bixisaa nadiif ah 98% budo cayriin ah Androsterone si ay u sameeyaan jirka ama shayaalka hoose ee isticmaalka afka.
Nandrolone propionate budada
Qalabka phenylpropionate testosterone
Dufanka afka Turinabol (Oral Tbol)
Anterolics steroids (46)
Qalabka budada Boldenone (4)
Taxane Drostanolone (2)
Koobabka budada methenolone (2)
Nandrolone budada budada (7)
Taxanaha budada ah ee testosterone (18)
Taxanaha budada Trenbolone (6)
Gowrado Dumar ah (21)
Dawooyinka PCT (6)
Qaar kale waxay (14)
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) budada
Stanozolol / Winstrol / budada winny
Budada AC 262356